Masaajida Sweden oo lagu haayo weeeraro iyo hanjabaad | Somaliska
Masaajida Sweden oo lagu haayo weeeraro iyo hanjabaad
Baaritaan lagu sameeyay xaalada masaajida ku yaala Sweden ayaa lagu soo bandhigay in kala bar masaajida loo soo jeediyay hanjabaado, halka labo meelood sadex meel lagu qaaday weeraro. Baaritaan oo ay sameeyeen lix urur oo Muslim ah ayaa lagu wareystay 110 jaaliyadood oo ku yaala daafaha Sweden.
Masaajida la wareystay ayaa ku jawaabay in si joogto ah hanjabaad loogu soo jeediyo, iyadoo qaar badan daaqadaha iyo muraayadaha laga jabiyay. Masaajida sida joogtada loo weeraro ayaa waxaa ka mid ah masaajidka Flen oo horay u ahaan jiray kaniisad. Masaajidkaas ayaa bilihii la soo dhaafay dhowr jeer la weeraray oo dhaawacyo waaweyn loo geystay.
Maamulka masaajida ayaa ka waramay in ay sii adkaanayso xaalada Muslimiinta iyo Islaamka Sweden, iyadoo aysan dareemayn nabadgalyo. Masaajida waxyeelada loo geystay ayaan helin lacag lagu dayactiro. Dhinaca kale, Muslimiinta ku cibaadaysata masaajida ayaa ka cabanaya in marka ay masaajidka imaanayaan iyaga xitaa la weeraro, iyagoo qaarkood baabuur lagu ceyriyo.
Cunsuriyada ka dhanka ah Muslimiinta iyo naceybka Islaamka ayaa sanadihii dambe aad ugu soo kordahay Sweden, iyadoo ka dib markii ay xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) ay baarlamaanka soo galeen ay aad ugu soo badatay saxaafada Sweden hadalada naceybka ah ee looga soo horjeedo Muslimiinta iyo Islaamka.